Isaladi elula yeTaco - Ungadliwa
ungenza kanjani amabhisikidi eshizi nge-pillsbury
ungasebenzisa isiphuzo se-marinara nge-spaghetti
Isaladi elula yeTaco
Isaladi leTaco crispy, crunchy futhi ezimibalabala! Ulethisi omnandi ugcwele inyama yenkomo enomsoco, ama-crispy tortilla chips nakho konke okuthandwa yi-taco toppings.
Kuyashesha kakhulu, kwenza ukudla okulula kwamasonto onke noma ngisho nokwakha ibha yesaladi ye-taco yakho lapho usuthisa isixuku!
Indlela Yokwenza Isaladi Le-Taco
Isaladi le-Taco liyisisekelo esikhulu lapha! Kuthatha cishe imizuzu engama-20 ukuqala ukuqeda (ikakhulukazi uma unezinye izandla ekhishini elungiselela ama-toppers) futhi kungukuhluka okwamukelekile ama-tacos enkomo omhlabathi !
Inyama yenkomo ensundu kanye nonyaka. Hlanganisa ubhontshisi.
Geza ulethisi naphezulu ngenhlanganisela yenkomo kanye nokokufaka okuthandayo.
Gcoba ezitsheni noma emapuletini bese phezulu nge-tortilla chips, ukhilimu omuncu, ne-salsa.
Uma ungathanda ukwenza isitsha se-tortilla esibhakwe esiphundu (sengathi ungathola endaweni yokudlela), kulula ukubhaka ekhaya!
Ukwenza i-Crispy Baked Taco Salad Bowl
Fafaza i-tortilla yempuphu nge-spray spray (noma uyihlanze ngebhotela noma ngamafutha omnqumo) kanye nenkathi ngosawoti kanye ne-fave seasonings yakho (ikhumini noma i-chili powder kuhle).
Beka i-tortilla esitsheni sobufakazi se-ovini noma ku umenzi wesitsha se-taco .
Bhaka amaminithi angu-10-15 noma kuze kube nsundu kancane futhi crispy!
Izithako Zesaladi Le-Taco
Ubuhle balesi saladi esiphefumulelwe se-tex-mex iqiniso lokuthi ungayifaka ngokwezifiso kulokho onakho noma okunye okufunwa ama-buds wakho wokunambitheka!
Ngisebenzisa inyama yenkomo engenamafutha kodwa i-ground turkey noma inkukhu izosebenza futhi, noma ngisho nezimfanzi ezinamanzi.
Ngincamela Isizini Yokwenza I-Taco kepha isitolo esithengiwe sizokwenza ingcosana!
Ubhontshisi omnyama noma ubhontshisi we-pinto yizengezo ezinhle futhi.
I-romaine noma ulethisi weqhwa uyashesha futhi ubambe kahle.
Qoba noma uyiklebhule ibe izingcezu ezilinganayo.
Ushizi - I-Cheddar, imabula, i-mozzarella noma i-Monterey Jack muhle.
Ama-Tortilla Chips - Khetha ama-chips wakho we-tortilla owathandayo. Qiniseka ukuthi ungeze ngaphambi nje kokuphaka ukuze zihlale ziminyene!
Sebenzisa ama-chips noma i-Doritos enamakha ukwenza lokhu kube mnandi Isaladi likaDorito Taco inguqulo.
Imifino - Faka ukunambitheka okumnandi kwemifino efana neminqumo, upelepele wensimbi, u-anyanisi, i-jalapenos, ukwatapheya, noma ama-chiles aluhlaza ngaphezulu.
Okwakudala - Ukhilimu omuncu ne-salsa yindlela yethu yokugqoka yalesi saladi.
Ukhilimu - Zama i- Ukugqoka i-Ranch noma Ukugqoka Ukotapeya . Lokhu kuzosiza ngokuphelele inyama yenkomo nejalapenos ebabayo.
I-Zesty - Noma ungasebenzisa Ukugqoka Isiqhingi Sezinkulungwane noma isitolo sathenga iCatalina ngenye indlela yummy.
Ongakusebenzela nge-Taco Salad
Le Taco Salad nakanjani iwukudla okugcwele uqobo, mane nje ukubhangise nesiphuzo esibandayo njenge-horchata, ilamuna , noma isithelo Sangria noma Imbali yeDaisy !
Uma ufuna ukugcina imenyu yakho ilula kakhulu, phaka ama-tortilla athambile ohlangothini ukuze wakhe i-taco esheshayo noma i-burrito ngomumo.
Ukondla isixuku esikhudlwana? Faka Ilayisi LaseSpain noma lobu buxhakaxhaka I-Cilantro Lime Rice kwimenyu yakho! Ngokuhambisana netimu yaseMexico nokuqeda kusihlwa, zama i-dulce de leche, i-mousse chocolate yaseMexico noma I-Easy Sopapilla Cheesecake okwe-dessert!
Ukupheka Okungaphezulu Okuphefumulelwe KweTaco
I-Crockpot Inkukhu Tacos - Izithako ezimbalwa nje!
Isobho leTaco - imizuzu engama-30 yokudla
Ama-Fish Tacos alula - Intandokazi yomndeni esheshayo.
Inkomo Taco Casserole - Kuhle kakhulu ngobusuku bamasonto!
Ama-Shrimp Tacos - Iphekwe kahle noma ithosiwe
I-Beef Taco Pasta Skillet - Izingane ziyasithanda lesi sidlo esilula.
I-Slow Cooker Shredded Beef - Iphelele kumaTacos noma ama-Enchiladas!
Isikhathi sokulungiselelaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Sokuphekaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Esiphelele30 imizuzu Izinkonzo8 izinsizakalo UmbhaliUHolly Nilsson Le saladi elula ye-taco i-crispy, i-crunchy futhi inemibala! Kumnandi kakhulu ukuhlanganisa ngoba ungenza ngezifiso okokufaka, wenze wonke umuntu etafuleni lesidlo ajabule! Phrinta Phina
▢1 iphakethe taco isithokelo noma eyenziwe ekhaya
▢1 inkomishi ubhontshisi omnyama kukhishwe futhi kuhlanjululwe
▢6 izinkomishi i-romaine noma ulethisi weqhwa oqoshiwe
▢1 inkomishi utamatisi oqoshiwe
▢1 inkomishi ushizi we-cheddar osikiwe
▢1 ukwatapheya kuqoshiwe
▢1 inkomishi ama-tortilla chips
▢½ inkomishi usoso
▢½ inkomishi ukhilimu omuncu
▢toppings njengoba oyifunayo iminqumo, insimbi yensimbi, i-jalapenos, u-anyanisi obomvu noma oluhlaza
Inkomo ensundu phezu komlilo ophakathi kuze kungabikho pink. Khama noma yimaphi amafutha.
Faka isinongo se-taco namanzi ½ enkomishi. Bamba imizuzu emihlanu noma uze uqine. Hlanganisa ubhontshisi.
Faka ulethisi endishini enkulu. Phezulu ngenyama, utamatisi, ushizi, ukwatapheya kanye nokokufaka okufiswayo.
Phezulu ngakunye ukhonza nge-tortilla chips, i-salsa no-ukhilimu omuncu.
Ngenkathi sisebenzisa ukhilimu omuncu ne-salsa njengokugqoka, i-catalina noma i-Thousand Island nayo iphonswa kahle ngale saladi.
Amakholori:360,Amakhabhohayidrethi:amashumi amabilig,Amaprotheni:19g,Amafutha:2. 3g,Amafutha agcwalisiwe:9g,Cholesterol:61mg,I-Sodium:328mg,Potassium:608mg,Umucu:6g,Ushukela:ezimbilig,Uvithamini A:3585IU,Uvithamini C:6.9mg,I-calcium:178mg,Insimbi:2.7mg
Igama elingukhiyeisaladi le-taco InkamboIsidlo sakusihlwa KuphekiweI-Mexican© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .